Tag: blog zvinyorwa | Martech Zone
Tag: blog zvinyorwa
Iyo Playbook yeB2B Yekutengesa Pamhepo
China, August 7, 2014 Chitatu, Nyamavhuvhu 6, 2014 Douglas Karr
Iyi inonakidza infographic pane marongero akaendeswa neanenge ese anobudirira bhizinesi-kune-bhizinesi online zano. Sezvo isu tichishanda pamwe nevatengi vedu, izvi zviri padyo padyo nekutarisisa nekunzwa kwekubatana kwedu. Kungoita B2B kushambadzira pamhepo hakuzowedzere kubudirira uye webhusaiti yako haisi kuzoita zvemashiripiti kuburitsa bhizinesi idzva nekuti iriko uye rinotaridzika zvakanaka. Iwe unoda nzira dzakakodzera dzekukwezva vashanyi uye shanduko
Zvemukati Kushambadzira haisi rocket sainzi, asi zvinoda kumwe kutsvagisa, hunyanzvi uye zano rekuwedzera mabhenefiti. Pakati payo, isu tinovimbisa kuti vatengi vedu vari kunyora zvinoenderana, zvazvino uye zvinowanzoitika zvemukati zvemisoro yekufarira. Isu tinoona kuti isu tine mabhesiki enzira yekujoinha - zvemukati zvinotungamira kushevedzo kune chiito chinotungamira mukushandurwa. Uye isu tinoona kuti mutengi haasi kungo nyora blog zvinyorwa - ivo